Usethi khumu kulo nyaka u-Advocate uMadonsela - Bayede News
Kulabo abangamuzwa kahle bathi ngcingci kamdoli kanti kulaba abamesekayo babuka inhlekelele
KUKHONA into eluteku odabeni oluthinta u-Advocate uThuli Madonsela. Lesi sisebenzi sombuso esidume umhlaba wonke ikakhulukazi ngokuphenya udaba oluthinta ukuvuselelwa komuzi kaMengameli wezwe uMhlonishwa uJacob Zuma, okwaDakwudunuse eNkandla. Okumangalisayo lapha wukuthi nguye siqu uMengameli owaqasha u-Advocate uMandosela, mhla esayina okwabe kuyizincomo zekomiti lePhalamende. Ngokomthethosisekelo uMengameli wabe enegunya lokuthi alichithe igama lakhe. Okunye okumangalisayo wukuthi kababaningi abafisa ukunika uMengameli uphaphe lwegwalagwala ngokubeka okaMandonsela ngonyaka wezi-2009 njengoMvikeli woMphakathi wesithathu. Owokuqala kwaba ngu-Advoacate uSelby Baqwa owaphatha kusuka ngowe-1995 kuya kowezi-2002. Owesibili kwaba ngu-Advocate uLawrence Mushwana yena owathatha izintambo kusuka ngowezi-2002 kwaze kwaba ngunyaka wezi-2009.
Namuhla igama iNkandla kanye nalelo lika-Advocate uMandonsela sekulunjaniswa nje nenkohlakalo enkulukazi eyake yenzeka kuleli kusuka ngonyaka we-1994. Kwabanye uZuma noMandonsela yinkukhu nempaka, kanti abanye bathi wazigwaza ngowakhe mhla “emqasha”. Sekungumlando ukuthi uMandosela wafike wenza izimanga esikhundleni sokuba nguMvikeli woMphakathi njengoba kwakunezikhalo nje zokuthi abesilisa ababili ababeqhoqhobele lesi sikhundla ngemuva kwakhe babe ngenalo uhlonze ikakhulukazi uAdvocate uLawrence Mushwane athatha kuye uMandonsela. U-Advocate Mushwana wabe esolwa kakhulu ngamaqembu aphikisayo ngokuthi ulandela imilayelo ye-African National Congress (ANC) nxa enza umsebenzi wakhe njengoMvikeli Womphakathi.
Konke lokhu kuguqukile ngesikhathi sika-Advocate uMandosela nowenze umsebenzi omkhulu ukugqamisa ukusebenza kweHhovisi loMvikeli woMphakathi. Lokhu ubekwenza ngokusebenzisa abezindaba lapho ethula uphenyo lwakhe nobekwenza wonke umuntu abe nolwazi. Nokho khona lapho bekungebona bonke abantu abakushayela ihlombe lokho ngoba abanye bebeze bamsole ngokuba ngunontanda kubukwa. Bebekhona nabemsola ngokuthi akathandi ukugxekwa ngezinqumo zakhe nokuthi ubuye aphule umthetho.
Embikweni awethula ngeNkandla owaziwa ngokuthi yiSecure in Comfort nowawungamakhasi angama-447, u-Advocate uMadonsela wasolwa ngabameli kanye nenyunyana yothisha iSouth African Democratic Teachers Union (Sadtu) KwaZulu-Natal ngokuthi embikweni wakhe wephule umthetho. Bezibiza nge Concern Lawyers and Educationist for Equality before the law (Cleeblaw). Ngokwemibiko yangaleso sikhathi i-Cleeblaw yayinezinhlelo zokuhlanganisa umqulu ozokwethulwa ePhalamende nowame ukhomba amabatha embikweni ka-Advocate Mandonsela.
Omunye wabakhulumeli balolu hlaka kwakungummeli uMnu uConfort Ngidi. Ebuzwa ngomkhankaso wabo uNgidi uthe ngo-Advocate uMadonsela nokwenza bathatha isinqumo sokumphikisa: “Ubesebonakala njengomuntu osebenzisana namaqembu aphikisayop ekuhlaseleni uMengameli uZuma. Yingakho size sabhalela iPhalamende incwadi sikhononda ngaye saze senza nezincomo esikholelwa ukuthi iningi lezinto esasizibalulile ukuba zamukelwa yiPhalamende njengoba zigcine zenziwe. Lokhu ngikusho ngoba naye u-Advocate uMadonsela ngemuva kokubhalela iPhalamende kushintshile ukwenza nokuziphatha kwakhe.” UMnu uNgidi uqhube wathi: “Ezintweni esabe siziphakamisile kunye kuphela iPhalamende eligcine lingakulandelanga lokho kwakuyisiphakamiso sethu sokuba abekwe amacala okungaziphathi kahle u-Advocate uMadonsela,’’ Ebuzwa ukuthi ngaphandle nje kodaba oluthinta uMengameli uZuma ngokwakhe u-Advocate uMandosela usebenze kanjani, uNgidi uthe “ “Vele ubedala izinkinga kuleli Hhovisi ngoba ethanda ukuba ngunontanda kubukwa. Ngenxa yokuthi ubengenaso sipiliyoni sokusebenza njengommeli yingakho ebengenakho ukuqonda ngokuthiu yini ebhekeke kuyena njengoMvikeli womphakathi nokusebenza komthetho. Yebo wazifundela ezomthetho kodwa akakaze asebenze njengommeli. Empeleni lo msebenzi wokuba nguMvikeli Womphakathi ubudinga umuntu osesigabeni sikaMehluleli osathatha umhlalaphansi hhayi umuntu osemusha nosenezinhloso zokuqhubekela phambili,’’ kuphetha uNgidi. Nokho lokhu okushiwo nguNgidi (ngokuswelakala kwesipiliyoni) kubukeka kuyinto engaphikiswa kalula ngoba ngesikhathi eqokelwa esikhundleni u-Advocate uMandonsela wabe enguKhomishana kuSouth African Law Reform Comission. Unomlando wokubhala noma ukuba yingxenye yalabo ababhala imithetho yezwe okubalwa owe-Employment Equity Act, owePromotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act kanye neLocal Government Transition Act. Wayebuye anikezela ngezeluleko ezaba yisithako ekuguqulweni komthetho iBlack Administration Act, oweJudicial Independence, kanye nokubuyekezwa kweCustomary Law of Succession kanye noweMaintenance Law and the Domestic Violence Act. U-Adocate uMandonsela uneqhuzu leLLB, Human Rights and Constitutional Law alithola eNyuvesi yaseWitwatersrand (1987) futhi uneqhuzu leLLB alithola kuso lesi sikhungo ngonyaka we-1990.
Noma ebeliqaqa kepha ubeziphungela
Phezu kokunconywa ngomsebenzi wakhe lapha eNingizimu Afrika nasemazweni omhlaba u-Advocate uMandonsela ube yiqaqa kwabanye. Omunye wabantu abebengamuzwa kahle yilowo owabe enguSihlalo weKomiti lePhalamende elibhekelele ezobulungiswa uMhlonishwa uMathole Motshekga. Leli komiti yilo elibhekelele ukusebenza kweHhovisi loMvikeli woMphakathi. Bekwaziwa ukuthi njalo uma kunomhlangano weKomiti neHhovisi lika-Advocate uMadonsela kusuke kuzoqhuma izinhlansi. UMhlonishwa uMotshekga wayengakufihli ukuthi unombo wokuthi umthetho owengamele ukusebenza kweHhovisi loMvikeli womphakathi. “ iPublic Protector’s Act ibhalwe kabi idinga ukubuyekezwa” kusho uMhlonishwa uMotshekga nowaphinde wasola u-Advocate uMadonsela ukuthi usezibona engaphezu komthetho. Naye u-Advocate uMadonsela wayengazibeki phansi kule mihlangano ngoba wayekhala ngokuthi amalungu eKomiti awalihloniphi iHhovisi lakhe komunye nje umhlangano ngonyaka owedlule wathi: “Lihlonipheni leli Hhovisi ngiyashiya ngonyaka ozayo”. Lokhu kwakuveza ngokusobala ukuthi wabe enomuzwa wokuthi amalungu eKomiti kakhulukazi e-ANC alwa naye siqu.
Omuye owabe engamuzwa uMandosela nguNobhala-Jikelele we-ANC, uMnu uGwede Mantashe. Odabeni lwaseNkandla uMantsahe kwathi akamudle luhlaza okaMadonsela.
“NgokweSahluko Sesihigalolunye, unesibopho sokuvikela ubuqotho beHhovisi Lomvikeli Womphakathi uma esebenza ngokwezipbopho zakhe,” kusho uMantashe.
“Lokhu kusho ukuthi akufanele abukele phansi enye ingxenye yombuso lena azihlangula ngayo, eqhuba umbiko lona awuhlanganisayo.” UMantashe uthe ukuziphatha kukaMadonsela kuthintibeza umsebenzi wePhalamende namakomidi alo. UMantashe ubebhekise encwadini okubikwa ukuthi uMadonsela uyibhalele uMengameli uJacob Zuma mayelana nombiko ngeNkandla.
Abanye abebephikisana nokwenza kuka-Advocate uMandonsela bebeze bamthuke ngokuthi wabe eyingede yezinhloli zamazwe angaphandle. Besho nokuthi ubekwe yizinhloli zangaphandle ukuthi adicilele phansi isithunzi sezwe nesikaMengameli uZuma. Omunye wabantu abaphumela obala ngalezi zinsolo kwaba nguloyo oliSekela Ngqongqoshe eMnyangweni weZokuvikela noMakadebona nophinde abenguSihlalo weMKMVA uMhlonishwa uKebby Maphatsoe.
“Singeke sivume ukuba abantu babhozomele i-ANC. Sizokulwa futhi siyivikele i-ANC. UMadonsela kufanele asitshele ukuthi uthunywa ngubani.” Kusho uMaphatsoe.
Uthe uMadonsela ukhokhelwa iCIA. “Sebesebenzisa isizinda sethu manje. Lezi zinda zeSahluko Sesishiyagalolunye zasungulwa i-ANC kodwa manje sezisetshenziselwa ukuhlaba thina, uma ubuza ukuthi kungani, uthole iCIA. AmaMelikana afuna iSikhulu Esiphezulu (CEO) sayo eNingizimu Afrika, akufanele sikuvume lokho,” kusho uMaphatsoe.
Nokho uMhlonishwa uMaphatsoe wabuye wahoxisa emuva kokuthi kube nokuhhumuzela ngakushilo, kanti naye okaMandosela wabe emkhombe ngomunwe ethi uzomyisa enkantolo. Encwadini ayibhala yokuxolisa uMhlonishwa uMaphatsoe wathi: “Ngibeke izitatimende ngokwesikhundla sokuba ngusihlalo kazwelonke weMKMVA ngoMvikeli Womphakathi, emva kokubonisana nenhlangano yami, i-ANC, kubukeka sengathi izitatimende zami aziqondwanga futhi zahunyushwa kabi. ‘ngakhoke ngiyazihoxisa lezo zitatimende ngibuye ngixolise ngokuthunaza nokulimaza abathintekayo.”
UMadonsela usechonywe uphaphe kaningana njengalapha: ngowezi-2011 iDaily Maverick yamqoka njengeSouth African Person of the Year ngokuba umvikeli okwazi ukusebenzisa amandla aphezulu ngaphandle kokunananza. Bese kuthi ngowezi-2014 iTime Magazine yona yamqoka njengomunye kabala-100 emhlabeni-jikelel abe nomthelela emkhakheni wabaHoli bamchaza njengesibonelo esikhuthazayo okufanele onke amahhovisi e-Afrika abukele kusona. Ngawo unyaka ofanayo waqokwa njengoWesifazane Onesibindi emiklomelweni yeGlamour Women of the Year. Kulo nyaka ubezitapela bheka ne-ANN7 imgixabeze ngeSouth African of the Year. Ungakapheli lo wezi-2014 usezuza eseTransparency International Integrity Award. Ngonyaka odlule nakhona awuphelanga engazuzanga lutho nakhu amanyuvesi emthwesa imiyezane emhlonipha ngeziqu zobudokotela okuyilawa; iStellenbosch University ngoNdasa, iRhodes University ngoMbasa kanye ne-University of Cape Town ngoNhlangulana. Uhlonishwa yila mayunivesi nje veli iFort Hare yayisimnikile ngowezi-2013. Ukuthi khumu kuka-Adv. uMadonsela kulandela umthetho onika uMvikeli Womphakathi iminyaka eyisikhombisa esehhovisi.
nguMfo waKwaNomajalimane Jan 29, 2016